Khibradeyda markaan u adeegsanayo Google Earth Cadastre - Geofumadas
Disember, 2017 AutoCAD-AutoDesk, cadastre, Google Earth / Maps
Had iyo jeer waxaan arkayaa su'aal isku mid ah ereyada muhiimka ah ee ay isticmaalayaasha isticmaalaan Geofumadas oo ka socda mashiinka raadinta Google.
Miyaan iska diiwaan gelin karaa Google Earth?
Sidee ayay sax yihiin sawirrada Google Earth?
Waa maxay sababta sahankaygu u barokacsan yahay Google Earth?
Ka hor inta i ciqaabid waxa aad ka akhriyi doonaa in this article, i sii daa aan ku rid macnaha guud ee waayo-aragnimo aan u lahaa in ay qaataan sahan cadastral in mashruuc halkaas oo ay ahayd guuritaan qaabka ugu qiimaha badan ee search ay keentey in hababka lifaaqa iyo hab- ee dhaqanka.
Markii aan qiyaasey doorsoomayaasha waxa ay la micno tahay in la fuliyo sawirka 25ka degmo ee u baahan sahanka, waxaan xaqiiqsaday inay jiraan waxyaabo aan isku soo noqon:
- Waqtiga diyaaradaha ayaa mar hore soo maray, sababtoo ah waddanku waa mid kulaaleed, waxaana jira wakhti habboon kahor intaan la helin daruuraha, qiiqa iyo cimilada,
- Waxay ahaayeen sannado ay sawirkii dayax-gacmeedka ahaa ee iibsanayey tuubo aan lahayn ikhtiyaari ah oo la saadaaliyay duruufaha hadda la bixiyo,
-Hay'adda dawliga ah ee bixisay rukhsadaha duulista waxay ahayd badh duug ah, waxay rabtay milyaneer lacag ah (miiska, dabcan), sababtoo ah kala-baahinta degmo kasta. Ka sokow, diyaaraddu waxay igu dartay lacag dheeri ah si aan kor ugu qaado buushashka ay hay'addu sheegtay inay tahay midka keliya ee awood u leh kormeerka duulimaadyadaas.
- Lacagta la heli karo ayaa si dhib yar u gaartay si ay u sameyso habdhiska wanaagsan, laakiin kacdoon yar.
- Intii aan haysan lahaa lacagta, samaynta waqtiyada qatarta ah ee ka hor istaagay in ay natiijooyinka soo baxaan ka hor taariikhda oggolaanshaha qiimaha cadawga ee isbedelka quinquennium.
Markii aan dib u eegay natiijooyinka uu mashruucu dalbaday, waxaan ogaaday in habka carqaladaynta ee loo maro qaab wadajirka cadastre uu ka muhiimsan yahay sax ahaanta. Waxay ahayd mid aad muhiim u ah in la muujiyo qaabka isku-dhafka badan marka loo eego tayada ugu wanaagsan ee habka sharciga fudud. Marka waxaan doorbiday inaan soo gudbiyo quudhsiga oo aan ku degdego natiijooyinka muddada-gaaban.
Maqaalkani wuxuu ku salaysan yahay waayo-aragnimadan, in badan oo ah sida habka farsamada iyo dareenka caadiga ah marka loo eego cunto kariye; inkasta oo si aan macquul ahayn aan u adeegsaday tusaalooyin degmo, halkaas oo aan qirsanahay in «maraq-choros»Waxay dib u soo celineysaa xusuusta ka sii gudubta oo kaliya.
Sawirada Google Earth waxay leeyihiin saxan fiican (Aabayaal).
Aynu eegno sawirka muunadda ah. Heerka caymiska joogtada ah, waxaa loo arki karaa in sahankan aan ku sameynay wadarta idaacadda oo aan jaangooyooyin ku sameynayno godet gps, uu si aad ah ugu habboon yahay sawirkii jiray ka hor 2013. Dabcan, tan awgeed, waxay ahayd lagama maarmaan in la soo dejiyo sawirka si looga dhigo ugaarsi dhibcaha xakamaynta in aan kor u qaadnay. Xaaladdan oo kale, barakac (sawirka, maahan sahanka) waa in laga sameeyaa qiyaastii 11 mitir waqooyi-galbeed.
Sawirka Google Earth wuxuu u baahan yahay in loo wareejiyo marka loo eego sahankeena saxda ah. Marka tan la sameeyo, sawirku wuxuu muujinayaa iswaafajin.
Sawirada Google Earth ma laha kalsooni sax ah.
Ku sii socoshada tusaale ahaan, waxaan aragnaa in muuqaalka Google Earth ee ku cusub 2013 uu leeyahay barokicin ka duwan kan hore. Isku-dhafka u dhexeeya sawirrada ayaa leh miisaan xoog leh si aad u wanaagsan oo loo yareeyo in yar oo la arko joogitaan la'aan; Xaaladda wadada, eeg in sida ay tahay jihada cutubka aan loo arkeynin inay tahay in ay noqoto mid jinsi ah, laakiin xaq u lahaanshaha sahanku waxaad arki kartaa sida socodka oogu daba socdo sahanka; Inkasta oo ay kari lahayd kooras, haddana yaqaana waxay ogtahay in ay jirto derbi dusha ka ilaalineysa buundada oo aan isbeddelin sanado badan.
Marka, adeegsiga sawirkaas dhawaanahan ku lug leh shaqo la mid ah tii hore; go'aamiyaan qodobbada la aqoonsan karo oo lala xiriiriyo dhibcaha kontoroolka berrinka, ka dibna u wareeji sawirka vector, kaas oo aan caddaynay inuu ka duwan yahay sawirka kale. Dhaqanku wuxuu horseeday xalal xiiso badan, oo sawirka Google Earth uu ahaa tixraac wajiga khaladaadka laga sameeyay wadarta saldhigga, sida luminta indhaha gadaal, ogaanshaha in koox ubaahantahay in lawareejiyo, ansaxinta afar geesoodka cadastral ee adeeca a qaybinta ku saleysan darajooyinka saxda ah, daqiiqadaha iyo ilbiriqsiyada, iyo waxa aan la dhihi karin daliil ahaan khariidad saddex-geesood ah oo muujinaysa kala duwanaanshaha qiimaha cadastral ee lagu bixiyay dhulka iyo dhismayaasha. Waxyaabahan, iyada oo aan la helin sawir tixraac ah ama isticmaalka fudud ee barnaamijka CAD / GIS waa wax aan macquul ahayn.
Saldhigga sawirada Google Earth waa jaangooyooyin xabbadood oo sanooyin kala duwan, oo leh ilo kala duwan iyo is-khilaafsanaansho buuxda u dhaxeysa qeybahaas.
Xaqiijinta booska Google Earth waa sax.
Ka tagida dhibaatada sawirada, astaamaha spheroid-ka ee Google Earth adeegsado waa sax marka loo eego sahan kasta oo lagu saadaaliyo. Sawirka kore, markaad muujineyso iskuduwaha UTM ee Google Earth, feyl ka mid ah sahankeyga oo aan soo galiyay sida kml, saxnaanta iskuduwaha ayaan ka hadlin Datum WGS84, maadaama taasi tahay xog xisaabeed.
Dhexdhexaadinta Mashruuca, aqyaarta hay'adda gobolka waxay la martay qalab xoogaa sax ah. Waxaan u sheegnay inay u isticmaali karaan sahankeenna taageero ahaan, maaddaama ay yihiin jaangooyooyin guryaha loogu talagalay mashruuc ka kooban dalab. Way adkeyd in laga soo saaro buro cunahayga markii ay xaqireen mid ka mid ah wiilasha cadastre, iyagoo u sheegay in kor u qaadistiisu aysan waxtar lahayn.
Adeegga Google Earth ee loogu talagalay cadawga waa faa'iidadaada taageero ahaan
Xaqiiqdu waxay tahay sameynta go'aannadii hore ee loo oggolaaday inay siiso Google Earth isticmaalka iyo mudnaanta ay u qalanto. Sida dhammaan qalabka kale ee loo isticmaalay mashruuca, Google Earth waa mid kale.
Google Earth waa lagama maarmaan karo isticmaalka sawirada aan la heli karin, ma aha oo kaliya sanadka hadda laakiin sidoo kale taariikhaha taariikheed ee kale. Waxaan xasuustaa kulan uu duqa magaalada kaqeyb galay soo bandhigida natiijooyinka: «Google Earth has uxal la heli karo si loo helo sawirada degmada oo dhan, oo aan waligeed horay u soo bandhigin shirkad ama hay'ad dawladeed«. Markii uu weydiiyay guru a XNUMXs Cadastre in saxsanaanta ay xun tahay, ereyadiisa waxaa lagu duubay fiidiyowyadeyda: «Kuwani waxay xalinayaan, haddii aad hayso soo jeedin fiican, qori oo waan tixgelin doonaa«.
Waxa ay tahay inaan ilaawin ayaa ah in kuwa maamulka ay u baahan yihiin qalab fudud oo lagu muujiyo natiijooyinka heerka dhexe. Waxaa jira dad aan waligood aadi doonin berrinka, hortoodana waxaa looga baahan yahay mudaharaadyo jaantus ah oo Google Earth aan lagu beddeli karin xilligaas. Furitaanka kml ama adeegga WMS oo aan tusno iyaga in guryaha magaalooyinka iyo miyiga ee degmada ay jiraan, oo leh qaabka dhulka dhijitaalka ah iyo dhismayaasha dallacyadooda ay ku xiran tahay ka hor iyo ka dib gelitaanka mashruuca ... waa khibrad aad u qiimo badan. Iyagu kama warqabaan saxsanaanta, kama warqabaan sida aan u qaabeyno habka, laakiin waxay ku faraxsan yihiin inaan arko natiijooyin jaantus ah oo aan oggolaano jabinta culeysyada maamul ama shuruudaha macno-darrada ah ee bogagga badan.
Ka soo degsashada sawirrada Google Earth waxay ahayd wax nijaar ah. Qiimaha mashruucu wuxuu ku jiray maamulka wadajirka ah; Muhiim ma ahayn in la iibsado saldhig guud ama milimitir GPS degmo kasta. Beelkiiba hal bey ku filneyd, wayna sii wadayaan tan iyo markii ay kaligood isdaba mariyaan inta lagu jiro sanadka si ay ula socdaan sahanka ama u cusbooneysiiyaan kheyraadka ay sameeyeen sanad walba sida dib-u-maalgashiga dakhliga iyo sahaminta guud ee mashaariicda waddooyinka ama nidaamyada biyo nadiif ah.
U adkaysiga ikhtiyaarka isticmaalka Google Earth tixraac ahaan kaliya waa la dagaallamaya derbi. Kuwa u baxay inay siiyaan adeegyo cadastral ah dawladaha hoose macnahan ayaa ii sheegi doona in imika maayarradu aysan rabin inay lacag ku bixiyaan shaqo aad u sax ah, laakiin ay tahay adeeg lagu tababaro awoodaha maxalliga ah, adeegsiga agabyada qiimaha jaban iyo talo si go'aan looga gaaro waa sax.
Sanadahaas oo dhan kadib, waa inaan qiraa inay jiraan khaladaad aan sameeyay, oo aan ku qori lahaa maqaal ka ballaaran kan. Waxaan jeclaan lahaa in softiweer bilaash ah uu noqdo mid qaan gaar ah, oo markaa na keydiya lacag kale; ama in Khariidado badan iyo cadastre ujeedo ujeeddo faafitaanka badan, maxaa yeelay waxay igu bixin laheyd wax yar inaan sharaxo dhaqamada aan hirgalinay tan iyo markaas. Laakiin natiijooyinka maanta waxaan tixraacayaa:
Qaab dhismeedka cadawga ee ku salaysan maareynta isku dhafka ah ee degmooyinka waxaa jira, iyadoo la adeegsanayo shirkado kale, ma aha sababtoo ah dib-u-habayntiisa, laakiin casharradii laga bartay.
Halkii laga baari lahaa 25 degmo, khibrad ayaa u horseeday 89. Kaliya ka faa'iideysiga dhaqaalaha baaxadda maareynta wadajirka ah, iyo dabcan, iyadoo la adeegsanayo sawirrada Google Earth taageero ahaan.
Horumarinta ilaha dhaqaale ee maxaliga ah iyo kuwa dhaqaalaha ee ka soo jeeda meel kale oo aaney eegin, waxay keeneen in ay muujiyaan in deyn kasta oo maalgelin ka ah degmada, ay soo kabatay muddo ka yar laba sano waxayna ku kordhisay lix jeer dakhli muddada sanadaha 10.
Degmooyinka in gaari caymis dhammaystiran ee dhulkooda, ayaa hadda sameynta updates isticmaalaya dakhliga khayraadka ka oo dhan ka helay dalka, oo waxaa la beddelo metadata ee sax iyo tayada iyo joomatari.
Ku dhowaad dhammaadka mashruuca, waxaan mar kale la kulmay aqoonyahannada hay'adda dawladda, kuwaas oo ansaxinayey dhibaatooyinka qaarkood ee kacdoonnadoodu soo mareen, kuwaas oo ay hore u soo saareen magacyo isla markaana ku galeen nidaamka qaranka. Marka hore, iyagoo adeegsanaya cod keli-talisnimo ah, waxay noo sheegeen inaan wareejinno khariidadaha kor loo qaaday. Markii aan siinnay cinwaan ay ku soo dejistaan ​​WFS way naga tageen iyagoo u eg shisheeye, ka dib mid ka mid ah wiilashii yaraystay ayaa muujiyay iyaga oo isticmaalaya gvSIG; Wuxuu u sheegay inay ka soo dejisan karaan meeshaas markay doonaan. Isla weyni ayaa wejigiisa beddelay, waxaanan beddelnay macaankeenna waxoogaa naxariis ah, faallooyinkiisa soo socda:
Raali iga, Don Golgi, waxa aan runtii rabno waa inaad na siiso sawirada aad ka soo qaadatay Google Earth.
Beddelista si aad uga soo dejiso sawirrada Google Earth: Cad-Earth y Plex-Earth. Waxaan ku talinayaa labadaba.
Post Previous" Hore Arag iskuduwaha Google Earth ee Excel - una beddel UTM
Post Next Ma inaan bedelnaa ereyga "Geomatics"?Next »
Hal jawaab ah "Khibradeyda markaan isticmaalayo Google Earth ee Cadastre"
José Agustín Wilches Gómez isagu wuxuu leeyahay:
Nidaamka qibrada leh ee cadawga maaliyadeed, ama khariidadda tenencial. Uma maleynayo inay ku habboon tahay cadadyo badan ama ujeedooyin kala duwan.